လူနဲ့…အရောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူနဲ့…အရောင်
Posted by မိုးချမ်းမြေ့ on Dec 23, 2011 in Copy/Paste |9comments
လူရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီး…သိတတ်စအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့..လူတွေဟာမိမိကြံစည်တွေးခေါ်မှု၊ ပြောဆိုပြုမူနေထိုင်မှုအလိုက်၊ အရောင်တွေထွက်ပေါ်တတ်တာပါပဲ…။
ဒီနေရာမှာ..အရောင်ဆိုတာ..တတ်ထားတဲ့ပညာ၊ သိထားတဲ့အသိ၊ လေ့လာထားတဲ့ ဗဟုသုတ..စတာတွေကို..လုံးဝဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး…။ မိမိရဲ့ပြောဆိုချက်၊ ပြုလုပ်ချက်၊ နေထိုင်ချက်တွေကိုသာ ရည်ညွှန်းတာပါ..။ အဲဒီအရောင်ဆိုတဲ့.. ကြံစည်ချက်၊ ပြောဆိုချက်၊ ပြုမူနေထိုင်ချက်တွေဟာ..လူမဟုတ်ပါဘူး…။
သည်..သေသည်အထိ၊ သဘာဝအတိုင်းသာရှင်သန်နေတာပါ.။ဒါပေမယ့်လည်း..ကျမ်းမာရေး မကောင်းလျှင်တော့..ဆေးကုသရမှာပါ။ ဆာလာရင်လည်းစားပေးရမှာပါ..။ ၀တ်စရာရှိရင်လည်း ၀တ်ပေးရမှာ။ သို့သော်…ထိုလူသားကိုအမှီပြုပြီးနေစဉ်ဖြစ်တည်နေတဲ့
ဆိုရရင်…လူတစ်ယောက်မှာ..အိပ်ယာကနိုးထတာနဲ့ထပ်တူ..အရောင်တွေက တပါတည်းတွဲပါလာတတ်ပါတယ်.။ အဲဒီအရောင်ကိုသာ လူတွေ(ရွာသားရွာသူ)ကသာ သတိမထား
ဥပမာဆိုရရင်တော့..လူတစ်ယောက်ဟာ…စိတ်ထားဖြူစင်စွာနဲ့..အပြောအဆို၊ အပြု အမူ(ရေးသားမှု)၊ နေထိုင်ရှင်သန်နေထိုင်ရင်း..မိမိနဲ့ပတ်သက်သမျှပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းကို ဆက်
“ ဟော..ရွာသား..ကိုအ၀ှာပါလား…လာဗျို့..။ မျှော်နေတာဗျ..။ ကျမ်းမာရဲ့လား..။ မတွေ့တာကြာပြီနော်.။ အတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေရှိရင်လည်း..ပြောအုံးနော..။ ခင်ဗျားနဲ့
ကျက်သရေရှိလိုက်တာဗျို့..။ နောက်လည်းလာလည်အုံးဗျ..နော့…” ဆိုတဲ့အသံတွေဟာ
ထိုသူရဲ့ ပြောဆို၊ ပြုမူ၊ နေထိုင်ချက်အရောင်တွေကြောင့် သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထံမှ
ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောရင်..လူဟာ…လူပါပဲ..။ အရောင်မှမဟုတ်တာ..။ အရောင်ဆိုတာက..မိမိရဲ့..အသိဥာဏ်ရှိသမျှလောက်မှာ..ကြံစည်တွေးခေါ်၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်
ခြင်းပါပဲ..။ ဒါကြောင့်..လူကိုပြောင်းလို့တော့..ဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူး..။ ပြောင်းရမှာက
(မူလအရှိတရား + အဖြစ်တရား)= (အကျိုးရလာဒ်)
ရှင်ဘုရင် + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
မူးမတ် + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
အရာထမ်း + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
အမှုထမ်း + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
သူဌေးသူကြွယ် + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
စီးပွားရေးသမား + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
လက်လုပ်လက်စား + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
အနုပညာရှင် + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
ဘာသာရေးသမား + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
ဘုန်းကြီး + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
သီလရှင် + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
သူတောင်းစား + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
်ိ သုဘရာဇာ + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
ဓမ္မကထိက + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
နိုင်ငံခြားသာသနာပြု + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
ပရဟိ + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်
ဂူထဲသွားအောင်းနေကြ…။ မရ…။ တကယ့်ပြောင်းရမယ့်အချိန်က..ပတ်ဝန်း
ကျင်နဲ့ကူးလူးဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ..ဖြစ်ရမယ့်..ကာယ၊ ၀စီ၊ မနောဆိုတဲ့(ကံ)
“ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မဿကာ”..။
ဒါမှမဟုတ် … (ရှင်ဘုရင် + အရောင် = ရောင်ပြန်ရလာဒ်) ဆိုတော့…….
char too lan…ရေ..။ သင့်အရောင်ကောင်းကောင်း..မကောင်း. .ကောင်း…ကိုယ့်ဘက်ကအရောင်က…ကောင်းနေရမယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်…ကိုယ်နေထိုင်ဆက်ဆံနေရတဲ့အရပ်ဟာ… .အေးချမ်းမှုနဲ့မအပ်စပ်ဖူး… သူတော်ကောင်းတို့…မွေ့လျော်ရာမဖြစ်ဘူး…အန္တရယ်လည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့… .ကြားဖူးတဲ့စကားလေးပြောပါရစေ…။ (မှားနေရင်လည်းပြင်ပေးပါ) ဟောင်တတ်တဲ့ခွေးဆိုရင်… တစ်တောင်ကွာ..။ ကိုက်တတ်တဲ့ခွေးဆိုရင်…တစ်လံကွာ..။ ခွေ့တတ်တဲသတ္တ၀ါဆိုရင်…နှစ်လံကွာ…စသဖြင့်ပေါ့လေ..။ အဲ….အသက်ကိုတောင်ရန်ရှာလာနိုင်ရင်တော့…. အရပ်ဒေသကပါရှောင်တိမ်းနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ…။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကောင်းနေတာပဲလေဆိုပြီး…ကျိတ်မှိတ်နေမှာတော့… မဖြစ်စေချင်မိဘူးဗျာ…။ နားလည်မိသလောက်ပြောမိတဲ့…ဆန္ဒပါ..။ အဂတိတရားလေးပါးထဲက..ဆန္ဒာဂတိမျိုးတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး…။
အသစ်တွေရဲ့ လက်စွမ်းကလဲ မခေပါလားဟေ့ …
ကောင်းပါတယ် ဆက်ရေးပါနော ..